tech news | My Burmese Blog
Posts Tagged: tech news	Google+ And Swiffy
On March 27, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News	Think Quarterly ဆို​တာ​က Google က​နေ အသစ် လုပ်​ထား​တဲ့ project တစ်​ခု​ပါ။ အွန်​လိုင်း မဂ္ဂဇင်း​တစ်​ခု ဖြစ်​ပြီး နည်း​ပညာ၊ ဗ​ဟု​သုတ၊ စီးပွား​ရေး၊ အနု​ပညာ စ​သ​ဖြင့် အစုံ​ပါဝင်​ပါ​တယ်။ တိတိ​ကျ⁠ကျ​ပြော​ရ​ရင် ဒီ မဂ္ဂဇင်း​က Google UK ရဲ့ project ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ရှင်း​ရှင်းလင်း​လင်း​ရှိ​တဲ့ grid layout နဲ့ လုပ်​ထား​ပြီး အပေါ်​က page flick က စ⁠စ​ခြင်း​မှာ သဘောကျ​မိ​ပေ​မယ့် သေချာ​ကြည့်​တော့​မှ flash ဖြစ်​နေ​တာ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။ 20ThingsILearn က HTML only က​မှ ပို​မိုက်​သေး​တယ်​လို့ ထင်​တယ်။ mobile version site လည်း​လုပ်​ထား​လို့ တော်​သေး​တယ်။ တစ်​ခု​ကောင်း​တာ​က pdf download ပေး​ထား​တာ​ပါ​ပဲ။ tech news	Twitter Turns5Years Old!
On March 23, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News	နောက်ကျ​နေ​ပြီ ဆို​ပေ​မယ့် တင်​ချင်​သေး​လု​ိ့ ထပ်​တင်​ပါ​တယ်။ လွန်​ခဲ့​တဲ့ ရက်​ပိုင်း​က​ပဲ Twitter.com က သက်​တမ်း ၅ နှစ် ပြည့်​သွား​ခဲ့​ပြီ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​လို ၅ နှစ်​ပြည့်​မှာ ထူး​ထူးခြား​ခြား အနေ​နဲ့ discover.twitter.com ဆို​ပြီး page ဆောက်​ထား​ပြီး ဗီ​ဒီ​ယို အတို​လေး​တစ်​ခု​လဲ တင်​ထား​တာ​မို့ ဘ​လော့ဂ်​မှာ ကြည့်​ရအောင် ပြန်​တင်​လိုက်​ပါ​တယ်။ အာ​က​သ​ထဲ​မှာ​တောင် twitter သုံး​ကြ​တယ်​ဆို​တော့ Alien တွေ​လဲ အကောင့်​မ​ရှိ​ဘူး​လို့ မ​ပြော​နိုင်​ဘူး နောက် ဗီ​ဒီ​ယို တစ်​ခု​လဲ တင်​လိုက်​ပါ​တယ် အဲ​ဒါ​ကတော့ Twitter Co-Founder Biz Stone နဲ့ Conan O Brian တို့ ရဲ့ ၅ နှစ်​ပြည့် အင်တာဗျူး​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ရှု​စား​ကြ​ပါ​ဦး။ Birthday, tech news	Continue Reading
HTML5got Logo
On January 19, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News, Web	ဒီ​နေ့ HTML5က သူ့​ရဲ့ လို​ဂို​အသစ် စ​ရ​ပါ​တယ်။ ဒါ​နဲ့ ဘ​လော့ဂ်​မှာ ဘန်​နာ ပြောင်း​လိုက်​ပြန်​တယ်။ သူ​တင်​မဟုတ်​ဘူး​ခင်​ဗျ သူ့​ရဲ တွဲ​ဖက် CSS3လဲ​ပါ​တယ်။ နောက်5ရဲ့ features တွေ အတွက်​လဲ ပါ​သေး​တယ်။ စ​တစ်​ကာ​တွေ ဖ​ရီး​စာတိုက်​က​နေ ပို့​တယ်​ဆို​လို့ စိတ်ဝင်စား​သွား​သေး​တယ် ယူ​အက်​မှာ ထိ​စာပို့ ရ​မှာ​ဆို​တော့ မ​ဖြစ်​နိုင်​လို့ မ​လုပ်​တော့​ဘူး။ တီ​ရှပ်​တော့ လို​ချက်​နေ​ပြန်​သေး​တယ်။ မ​ကြာ​ခင်​မှာ​ပဲ ကွ​ျန်တော်​လဲ ဘ​လော့ဂ်​ကို တမ်း​ပ​လိတ် အသစ်​ပြောင်း​တော့​မယ် HTML 5, CSS3ဖြစ်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ပြီး​ရင် validate လုပ် badge တွေ ထည့်​ပစ်​ဖို့ စဉ်းစား​ထား​တယ်။ ဒီ​နေ့​တော့ ဆား​ချက်​ပြီး အသစ်​တင်​လိုက်​ပါ​တယ်။ မ​ကြာ​ခင် အား​တာ​နဲ့ ကောင်း⁠ကောင်း​ပြန်​တင်​ပါ့​မယ်။ CSS, HTML, tech news	New Microsoft Surface is Awesome!!
On January 15, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News	US မှာလုပ်နေတဲ့ CES 2011 ပွဲမှာ Surface version 2.0 ကို​ပြသွားတာပါ။ အရင် Surface version 1.0 (Code named Milan Tabletop) တုန်းကတော့ လူသိပ်စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ အရင်က ရိုးရိုးကွန်ပျူတာကို ပက်လက်လှန် လက်နဲ့ တို့သုံးတာလို့ပဲ ထင်ကြတာကိုး။ အခုတစ်ခေါက်ကတော့ ထူးခြားပါတယ် ကွျန်တော်လဲ CNet Video ကြည့်ပြီး သဘောကျသွားတယ်။
Microsoft, tech news	Continue Reading
Sneak Peak @ FaceBook Email Feature
On January 11, 2011	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Tech News	FaceBook ကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းလောက်ကပဲ email ပို့လို့ရတဲ့ feature ကို အစမ်းသုံးဖို့ ကွျန်တော့်ဆီမှာ alert လာပြပါတယ်။ ဒီတစ်ခုက အရင်လတွေကတည်းက ပြောထားပြီးသား beta အနေနဲ့ invitation letter ရောက်တဲ့သူတွေ စမ်းသုံးလို့ရပြီးသားပါ။ ကွျန်တော်လဲ အရင်စပြီး announce လုပ်ကတည်းက အီးမေးပို့ပြီး beta tester လုပ်ဖို့ ပြောထားပေမယ့် အခုမှရပါတယ်။ အခုရတာက ယူဇာ အားလုံးရတာလား invite လုပ်ထားတဲ့သူပဲ ရသေးတာလားတော့ မသဲကွဲသေးပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူမှာမရဘူး ပြောပါတယ်။
tech news	Continue Reading
Register For Upcoming BarCamp Singapore 6
On August 26, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News	BarCamp Singapore6Event ကို အခုလာမယ့္ October 9, 10 (Sat And Sunday) ၂ ရက္ ၿပဳလုပ္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Camp က Singapore ရဲ႕ 2010 အတြင္းမွာ ဒုတိယေၿမာက္ လုပ္တာၿဖစ္ပါတယ္။ ပထမ အေခါက္ BarCamp SG5တုန္းက ကြ်န္ေတာ္ရိုက္ခဲ့တဲ့ ပံုေတြကို BarCamp Singapore5မွာ ၿပန္ၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။ အခုတစ္ေခါက္ကိုေတာ့ City Hall မွာ လုပ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Twitter hash tag က #BarCampSG6 ၿဖစ္ပါတယ္။
BarCamp, Events, tech news	Continue Reading
On April 17, 2010	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Tech News	Ning မွာ free လုုပ္ထားတဲ့ social networks အားလံုုးကိုု CEO အသစ္ေၿပာင္းသြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ မေန႔က ေၾကၿငာ တယ္ free ေတြအကုုန္ဖ်က္ေတာ့မယ္လိုု႔ တရားဝင္ေၿပာလုုိက္ၿပီ။ ဆိုုေတာ့ လက္ရွိ Ning ဆိုုဒ္ေတြ ဘယ္လိုုေရြ႕ၾကမလဲေတာ့ မသိဘူး။ MyanmarITPros, MyanmarLensMen ေတြကေတာ့ Premium Sites ေတြမိုု႔ အဖ်က္ခံရမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ အၿခား xxxx.ning.com ေတြကေတာ့ အကုုန္ဖ်က္ခံရလိမ့္မယ္ မဖ်က္ခင္ အၿခားေရြ႕ဖိုု႔ လိုုလာၿပီ။ ဒီေန႔ Tech Crunch မွာဖတ္မိတဲ့ သတင္းေလးၿပန္တင္ထားလိုုက္ပါတယ္.. Grou.ps, Grouply free Social Network Hosting ေတြက Ning Refugees ေတြကိုု ၾကိဳဆိုုတယ္ဆိုုပဲ။ ဘာရယ္မဟုုတ္ပါဘူး Ning Refugees ဆိုုတာေလး သေဘာက်လိုု႔ ၿပန္တင္လိုုက္တာ.. =D tech news	Older Entries	Recent Posts